IFirefox sele inenkqubo entsha yokucebisa kunye nembonakalo entsha kwiFocus | Ubunlog
IMozilla ityhile ukwaziswa kwenkqubo entsha yengcebiso kwiFirefox, Cebisa ngeFirefox enenjongo yokubonisa iingcebiso Yongeza njengoko uchwetheza ibha yedilesi, (into efana nokugqitywa kokuzenzekelayo okunikezelwe kwiChannel kunye nakwibrawuza esekwe kuyo).
Ukusuka kwizindululo ezisekwe kwidatha yendawo kwaye kuthunyelwe kwinjinjini yokukhangela, umsebenzi omtsha wahlukile kwisakhono sokubonelela ngolwazi kumaqabane angaphandle, anokuba zombini iiprojekthi ezingenzi nzuzo ezinje ngeWikipedia kunye nabaxhasi.
Umzekelo, ndiyazi xa ndiqala ukuchwetheza igama lesixeko kwindawo yeedilesi, ikhonkco lenkcazo efanelekileyo yesixeko iya kunikwa kwiWikipedia kwaye xa inqaku lifakiwe, ikhonkco lokuthenga kwivenkile liya kuvela I-eBay ekwi-Intanethi ibonelelwe.
Izibonelelo zinokubandakanya amakhonkco axhasiweyo ifunyenwe ngenkqubo yokunxibelelana nendawo yentengiso.
Lo msebenzi mtshaUkucebisa ngeFirefox »inokwenziwa okanye ikhutshazwe kwi "Ukufuna iingcebiso" icandelo le "Khangela" icandelo loqwalaselo.
Ukuba ukuCebisa ngeFirefox kuyasebenza, idatha efakwe kwibar yedilesi, kunye nolwazi malunga nokucofa kwizincomo, idluliselwa kwiseva yeMozilla, ethi yona ngokwayo igqithise isicelo kwiseva yeqabane lokuthintela amandla okudibanisa idatha kumsebenzisi othile ngedilesi ye-IP.
Ukubonisa izindululo kuthathelwa ingqalelo iziganeko ezenzeka kufutshane, Amaqabane nawo afumana ulwazi malunga nendawo yomsebenzisi, que Kuphela kulwazi malunga nesixeko kwaye kubalwa ngokusekwe kwidilesi ye-IP.
Ekuqaleni, yenaInqaku liya kusebenza kuphela kwinani eliqingqiweyo labasebenzisi base-US.. Ukongeza, ngaphambi kokuba usebenze ngeFirefox Cebisa, umsebenzisi uziswa ngefestile ekhethekileyo enesindululo sokuqinisekisa ukwenziwa komsebenzi omtsha.
Kuyaphawuleka ukuba kwindawo ebonakalayo imvume eneqhosha lokubandakanya icacisiwe gca, ecaleni apho kukho iqhosha lokuya kuqwalaselo, kodwa akukho qhosha elichazayo elichazayo, kuba kukho nje icandelo "Hayi ngoku" ibonisiwe kwikona ephezulu ngasekunene kushicilelo oluncinci ngekhonkco ukwala ukubandakanywa.
Enye into entsha thaca nguMozilla, sisiqalo sovavanyo lojongano olutsha isikhangeli Focus Focus ye-Android. Ujongano olutsha luya kubonelelwa ngoguqulelo lweFirefox Focus 93 apho iifonti zeFirefox zisasazwe kwakhona phantsi kwelayisensi ye-MPL 2.0.
Ngaphandle kwe gqibezela ukuyila ngokutsha konxibelelwano kwiFirefox Focus 93, Useto olunxulumene nokutshixa ikhowudi ukulandelela iintshukumo zomsebenzisi zisusiwe kwimenyu zaya kwiqela elinye.
Iphaneli ibonakala xa uchukumisa uphawu lwekhaka kwingxowa yedilesi kwaye iqulethe ulwazi malunga nesiza, iswitshi yokulawula ukubhloka kwabagibeli ngokunxulumene nesiza, kunye neenkcukacha-manani kwiitrackers ezivaliweyo.
Endaweni yenkqubo yokubhukisha, Inkqubo emfutshane icetyisiwe, ekuvumela ukuba uyongeze kuluhlu olwahlukileyo ("..." imenyu, "Yongeza kwiindlela ezimfutshane" ukuba uhlala ukhangela indawo.
Ukuthintela ikhowudi yomntu wesithathu kunciphisa kakhulu isixa sezinto ezikhutshelweyo kwaye kunefuthe elihle kwisantya sokulayisha iphepha. Umzekelo, kugxilwe, umthwalo wephepha kwi-avareji ye-20% ngokukhawuleza kunenguqulo yefowuni yeFirefox ye-Android. Isikhangeli sinayo iqhosha lokuvala ngokukhawuleza i-tab, ukucoca zonke iirekhodi ezinxulumene noko, ukungena kwe-cache kunye neicookies.
Kugxilwe kwiFirefox, ukuthumela i-telemetry kuvunyelwe ngokungagqibekanga ngamanani angaziwayo kwindlela yokuziphatha komsebenzisi. Ulwazi malunga nokuqokelelwa kweenkcukacha-manani lubonakaliswe ngokucacileyo kuseto kwaye umsebenzisi unokuyikhubaza.
Imithombo: https://blog.mozilla.org, https://techdows.com
Umendo opheleleyo kwinqaku: ubunlog » ngokubanzi » Izaziso » IFirefox sele inenkqubo entsha yokucebisa kunye nembonakalo entsha kwiFocus
IGnome 41, inguqulelo enezinto ezininzi eziphuculweyo kuyilo, ukusebenza kunye nokunye